PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-08 - UKHUZA IBUYA UMDLALO I-
UKHUZA IBUYA UMDLALO I-
Ilanga langeSonto - 2018-04-08 - Izindaba - LUCKY CAIN
KULINDELEKE ukuba kwethulwe ngokusemthethweni umdlalo weshashalazi owaduma ngeminyaka yawo-1970, obhalwe yinkakha yombhali ongasekho emhlabeni ugibson Kente.
Lo mdlalo osihloko sithi How Long ukhuza ibuya njengoba uzoqala ukukhonjiswa maduze eplayhouse Theatre, enkabeni yedolobha.
Ubuya nje usuqondiswe kabusha ngenye inkakha yemidlalo yeshashalazi uduma Kandlovu, kanti kubalingisi bawo kubalwa nabaziwayo endimeni.
Phakathi kwabalingisi abazobonakala kulo mdlalo kubalwa uthembi Mtshali oseke wabonakala emidlalweni eyahlukene kumabonakude kanti abakhulile bazomkhumbula edlala indawo kasis' Thoko kowamahlaya isgudi’snays.
Omunye nguphindile Gwala ozakhele udumo emdlalweni owuchungechunge umuvhango, ngukhaya Dladla odume ngelikagc komunye umdlalo owuchungechunge Uzalo, umondli Makhoba oke wabonakala kulona Uzalo nakwigenerations: The Legacy, kanye nonqobile Ndlovu.
Phambilini engxoxweni abe nayo NELANGA Langesonto UGC uzwakalise ukujabula ngokuthola ithuba lokulingisa kulo mdlalo.
“Okungichaza kakhulu wukuthi ngizolingisa indawo ebilingiswa ngundaba Mhlongo ongomunye wabalingisi ebengibahlonipha kakhulu,” kusho UGC. Ngolwesibili lo mdlalo uzokwethulwa ngokusemthethweni kwabezindaba kanti kuzobe sekumenyezelwa nezinsuku ozoqala ukukhonjiswa ngazo.
UPHINDILE Gwala ungomunye wabalingisi abazobonakala emdlalweni weshashalazi okhuza ibuya ihow Long ozokhonjiswa eplayhouse maduze.